Ingabe isimo sengqondo esincane sokucwasa abantu abamhlophe sinokwethenjelwa? "Ngisho nalapho abamhlophe behluleka ukubandlulula ngokobuhlanga babo, ingcebo yabo namandla abo bazohlala lapho bekhona"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Okthoba 31, 2018 03: 52 Awekho amazwana
Eqinisweni, bafunde ukuthi enye yezindlela ezinhle kakhulu zokugcina amandla abo kwakubonakala sengathi ayisihlanga ngokweqile… Ngakho isimo sengqondo esincane sokucwasa abamhlophe asithembekile kubantu abamnyama. Kumele siqaphele.
Ngu, Dokotela Amos N. Wilson
Isifiso senkululeko? Ukufuna inkululeko akufanele kube kuphela kumagama noma izitatimende zodwa; kodwa kufanele kubonwe ekuziphatheni kwethu nasezenzo zethu
Ukungabi Nabulungisa Kwezenhlalo E-United States: Owsley, Kentucky